हुआईभीले 15 अभिनव सेवाहरू र दुई साझेदारहरूको सहयोगको ढाँचा जारी गरे – Pandaily
हुआईभीले 15 अभिनव सेवाहरू र दुई साझेदारहरूको सहयोगको ढाँचा जारी गरे
जुन 16, 2022, 21:32अपराह्न 2022/06/16 23:12:04 Pandaily
मा…हुआवेई पार्टनर र विकासकर्ता सम्मेलनबुधबार, हुआवेई क्लाउडले 15 अभिनव सेवाहरू र GoCloud र GrowCloud साझेदारहरूको सहयोगको ढाँचा जारी गर्यो। सम्मेलनले ह्वाईवे आईसीटी फ्लैगशिप घटना-हुआवेई विकासकर्ता प्रतियोगिताको सुरुवात पनि चिन्ह लगाएको छ।
हुआवेई क्लाउड सीईओ झांग पिंगनले मुख्य भाषणमा भने, “व्यवसायको साथ डिजिटल गहिरो डाइविंग गर्न, साईएस क्रस-सेक्सन बढ्दै गएको छ। अर्को दशकमा, हामी दस वर्षको लागि एसएएसको सुनको लागि जान्छौं। हुआईई क्लाउडले सेवाको रूपमा सबै कुरा प्रदान गर्दछ। हामी सर्वोत्तम क्लाउड [सेवा] निर्माण गर्न प्रयास गर्दछौं, साईएस उद्योगमा छिटो क्षेत्र। क्लाउड सेवाहरू नवाचार र विकासका माध्यमबाट, साझेदारहरू र विकासकर्ताहरू नजिकको सहयोगमा, हामी अभिनव स्पार्कहरू बेवास्ता गर्न चाहन्छौं, भविष्यलाई हल्का पार्छौं।
हुआवेई क्लाउड सीईओ झांग पिंग (स्रोत: हुआवेई)
15 अभिनव सेवाहरू सेवाको विशेषज्ञता, एक सेवाको रूपमा प्रविधि र सेवाको आधारभूत संरचना समावेश गर्दछ। उनीहरूले औद्योगिक, सरकार, ताप्लेजुए, कोइला खनन र शिक्षा सहित पाँच aaaaS सेवा; दुई कोर aPaaS सेवाहरू: एक स्टप अमीर मीडिया समाचार अनुप्रयोग KooMessage र डिजिटल ट्विन KooMap अनुप्रयोग; र नयाँ क्लाउड स्टोर कोगलर।
जांगले डाटाआट्स डाटा प्रशासन पाइपलाइन र तीन अन्य पाइपलाइनहरूको लागि नयाँ सेवाहरू पनि घोषणा गरे। यी पाइपहरूले MetaStudio डिजिटल सामग्रीको लागि वर्चुअल सेवा समावेश गर्दछ ModelArts AI र DevCloud सफ्टवेयर विकास पाइपलाइनहरूको लागि मोड्स आइडीईको लागि ModelBox (एक एएआई अनुप्रयोग विकास ढाँचा) र CodeArts IDE को लागि।
GoCloud र GrowCloud को दुई सहकारी ढाँचा पनि घोषणा गरेको छ कि साझेदारहरू प्रतिस्पर्धा बढाउन र बजार पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गर्न। GoCloud को लक्ष्य साझेदारहरू को प्रतिस्पर्धा विकास गर्न र साझेदारहरूको साथमा हुआईईई क्लाउडलाई बलियो समाधान र सेवाहरू निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउनका लागि ग्राहकहरूको लागि अधिक मूल्य प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउने हो। GrowCloud साझेदारहरू ग्राहक कवरेज विस्तार गर्न, बिक्री वृद्धि बढाउन र दुवै पक्षहरूको लाभको फाइदा उठाउन मद्दत गर्दछ।
वर्तमानमा, 38,000 भन्दा बढी हुआइवेई क्लाउड साझेदारहरू, विकासकर्ताहरू 302 मिलियन भन्दा बढी व्यक्तिहरू छन्, साझेदारहरूले बजार उत्पादनहरू 7400 भन्दा बढी जारी गरे। हुवावेई क्लाउड एक स्मार्ट क्लाउड र कुंगेंग, एसिस्सेन्स, हर्मोनी ओएस र हुआवेई मोबाइल सेवा (एचएमएस) को रूपमा एक पारिस्थितिक प्रणालीको रूपमा एक विकासकर्ताको पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग गर्न को लागी। यस वर्ष हुआवेई क्लाउड लक्ष्य 1.4 मिलियन भन्दा बढी विकासकर्ताहरू आकर्षित गर्न र5लाख विकासकर्ताहरूको सम्पूर्ण सक्रियता योजना बनाइन्छ।
हुआवेई विकासकर्ता प्रतियोगिताको विषयको रूपमा “स्टार फायर अनंत” लाई आधिकारिक रूपमा साधारण सभामा सुरु भयो। आईसीटीटीका लागि हुआवेईको शीर्ष घटनाको रूपमा, हुआईभी विकासकर्ता प्रतियोगिताले क्लाउड आधारभूत ट्रयाक र उद्योग ट्र्याकलाई विश्वको छवटा प्रमुख क्षेत्रहरू समावेश गरेको छ र5लाख युआन (744,500 अमेरिकी डलर) पुरस्कार पूल प्रदान गरेको छ।
साधारण सभा पछि, हुवावेईले समूह भ्रमण स्वीकार गरे। Pandaily र अन्य स्थानीय मिडियाले सहयोगको ढाँचामा केही प्रश्नहरू राख्दछ।
अस्थिरताचीनको घरेलू विकासमा हुआवेईको क्लाउड बलियो वृद्धिको वर्तमान स्थिति। कम्पनीले पनि आफ्नो व्यापार बेल्टलाई विदेशमा विचार गरिरहेको छ, र अर्को तीन देखि पाँच वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रियकरणको लागि योजना के हो?
स्मिड्याक (हुआवेई क्लाउड ग्लोबल मार्केटिंग र बिक्री सेवाका अध्यक्ष): हुआवेई क्लाउड संसारको सबैभन्दा राम्रो क्लाउड सेवा प्रदायक बने। गत वर्षमा, हामीले एशिया प्रशांत, ल्याटिन अमेरिका, चीन र अन्य चार क्षेत्रहरूमा एक व्यवसाय स्थापना गरेका छौं। वर्तमानमा, हामी 27 क्षेत्रहरू, 65 उपलब्ध क्षेत्रहरू, 2,500 सामग्री वितरण सञ्जाल (सीडीएन) नोड छन्, 170 भन्दा बढी देशहरू र क्षेत्रहरूमा ग्राहकहरू र साझेदारहरू सेवा गरिरहेका छन्। हुआवेई क्लाउड विदेशी बजार विस्तार गर्दै आएको छ, त्यस क्षेत्रमा धेरै अनुभव संचित भयो। 2018 देखि, हामी हङकङ, सिंगापुर र मलेसियामा क्रमशः तैनात छौं। सेप्टेम्बरमा, हामी इन्डोनेसियाको नयाँ क्षेत्रमा सेवा गर्ने ’boutमा थियो। एकै समयमा, हामी फिलिपिन्स, भियतनाम, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूमा हाम्रो डेटा सेवन सेवाहरू तैनात गर्नेछौं।
आज, हाम्रो सीईओ श्री झांगले पूर्वाधार क्लाउड सेवाहरू, एक वैश्विक कोवरर्से नेटवर्क परिचय दिए। भविष्य, विश्वव्यापी एकीकृत नेटवर्क निर्माण योजनाको वरिपरि, हामी थप देशहरू र क्षेत्रहरूको लागि क्लाउड पूर्वाधार थप गर्न पहल गर्नेछौं। पछि यो वर्ष, हामी आयरल्याण्ड, टर्की र अन्य देशहरूमा क्षेत्र स्थापना गर्नेछौं। पछि, हामी अन्य विकल्पहरू जस्तै सऊदी अरब, फिलिपिन्स, मिश्र, स्विट्जरल्याण्ड र अन्य देशहरू पत्ता लगाउँछौं। छोटो, हुआवेई क्लाउड सधैं संसारको सबैभन्दा राम्रो क्लाउड सेवा प्रदायक गर्ने तयारी गरिएको छ। अर्को तीन देखि पाँच वर्षमा, हामी बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय लेआउट र व्यापार पदोन्नति बढाउनेछौं।
अखबार: म सधैं हुआइवेईको ’boutमा चिन्ता भएको छु जुन डिजिटल सामग्री उत्पादन लाइन र डिजिटल पाठको ’boutमा कुरा गरिरहेको छ। तपाईंको कम्पनीले पूर्ण विश्वव्यापी रणनीतिको घोषणा गरेको छैन, त्यसैले तपाईं हामीलाई केहि चीज साझेदारी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? यसको अतिरिक्त, डिजिटल पाठको परिचय यसको अर्थ हो कि हुआइभीले ब्रह्मांडमा यसको लगानी बढेको छ? अब बजारमा धेरै डिजिटल क्यारेक्टरहरू छन्। म तपाईंको फायदा के हो भनेर जान्न चाहन्छु, वा लन्च पछि एक अपेक्षाकृत शर्मिला अवस्थाको सामना गर्नेछ?
झांग युक्सिन (हुआवेई क्लाउड सीटीओ): एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखि, युआन ब्रह्मांड को अवधारणा पछिल्लो वर्ष देखि विस्फोट भएको छ, मलाई लाग््छ कि यो केहि हद सम्म एक प्रोमिक जिमको कारण हो। हुआवेई एक तकनीकी आधार हो, त्यसैले हामी प्रविधिको अनुमानमा रुचि राख्दैनौं। हामी चिन्तित छौं कि हामी उनीहरूको आफ्नै सोच मार्फत, एस्पेलेशनको सार बुझ्न सक्छौं, प्राविधिक आधार बुझ्न सक्छौं।
हामीसँग समाधान गर्न धेरै प्राविधिक उन्नयन छ। यस सम्मेलनमा, हामी हाम्रो डिजिटल सामग्री उत्पादन लाइन र मेटा स्टुडियो, विशेष गरी डिजिटल क्यारेक्टरहरू वरिपरि सेवा, भर्चुअल संगीत, सम्मेलन, कार्यालय सहयोग, औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक डिजिटल जुत्ता र अन्य अनुप्रयोगहरूको समर्थन गर्दछौं।
डिजिटल क्यारेक्टरहरूको अध्ययन गर्ने हाम्रो उद्देश्य क्षेत्र सुधार गर्न र क्षेत्रको सीमा विस्तार गर्न मद्दत गर्न हो। हाल, के यो संसाधन खपत वा वास्तविक समय अन्तरक्रिया हो, प्राविधिक आवश्यकताहरू उच्च छन्।
अर्को हेर्नुहोस्:हुआवेई क्लाउडले बीजिंगमा 16 मिलियन अमेरिकी डलरको नयाँ दर्ता पूंजी स्थापना गर्यो
Market जुन 24 जुन 24, 2021
Industry सेप 24 सेप्टेम्बर 24, 2021
बुधबार बुधबार क्यानिलिस द्वारा जारी एक रिपोर्टले बताएको छ कि 2022 को पहिलो क्वार्टरमा चीनको क्लाउड पूर्वाधार सेवा खर्चमा 21% वृद्धि भएको छ, 7.3 अरब अमेरिकी डलर, ग्लोबल क्लाउड पूर्वाधार खर्चको लगभग 13% लेखांकन।
ARCFOX अल्फा एस Huawei HI संस्करण जुलाईमा वितरित गरिनेछ
नयाँ एचआई संस्करणको अल्फाफा एस मोडेलको यसको अल्फा संस्करणको घोषणा गरेको छ जुन जुलाईको अन्तमा पूर्ण भुक्तानी प्रदान गरिएको छ वा ठूलो मात्रामा जम्मा भुक्तानी गरेको छ।
वर्गविहीन जुन 14 जुन 14, 2022